Warri Maqaa Xoophiyaatiin socha’an Oromiyaa fi Oromoo diigaa jiru! – Kichuu
HomeAfaan OromooWarri Maqaa Xoophiyaatiin socha’an Oromiyaa fi Oromoo diigaa jiru!
KUNOO MISEENSOTA KFO HIDHUUN ITTI FUFE.
1. Obbo Abirahaam Dhiyaanoo I/A Qindeessa koree KFO godina Wallagga Lixaa
2. Ob. Jaatanii Mitikkuu, miseensa koree giddu galeessafi barreessa koree godina Gujii Lixaa
3. Dargaggoo Dhugoomsaa Nagaasaa, dursaa liigii dargaggoota godina Shawaa Kaaba
Godina Arsii keessa
4. Ob. Bashiir Mohammad
5. Ob. Dinquu Mangistuu
6. Ob. Jamaal Jawaar
7. Ob. Nuuraa Abdallaa
8. Ob. Ramadaan Abdulqaadiir
9. Ob.Waacuu Duubaa
10. Ob. Gammachuu Anaa
11. Ob. Tissee Jaarsoo Bulloo
12. Ob. Liibaan Gannalee Cuwee
Godina Addaa Sabbataa
13. Ob. Ob. Morkaa Tolasaa, dura ta’aa liigii dargaggoo KFO
14. Ob. Ahimmad Nuur
15. Ob. Abeebee Disaasaa
16. Ob. Addisuu Disaasaa
17. Ob. Abdii Eebanuu
18. Ob. Rabbirraa Dabaree
19. Ob. Abarraa Baqqalaa
20. Ob. Dabalaa Birratuu
Deeggartoota KFO Godina Shawaa Lixaa keessaa
21. Ob. Taammiruu Alamayyoo
22. Ob. Baqqalaa Goshuu
23. Ob. Addunyaa Biraanuu fi
24. Ob. Dalasaa Abarraa hojjetaa mootummaa
25. Ob. Ob. Biqilaa Addunyaa hojjeta mootummaa
26. Ob. Qana’aa Waldee hojjeta mootummaa
27. Ob. Gaashawu Furgaasaa hojjeta mootummaa ti
Yaadachiisa: Namooti kun kan hidhan ajaja qaamni ol’aanaan kenneen ta’uusatifi gara Kaampii Xolaayitti erganii hanga xumura filannootti achuma tursuuf akka barbaadame odeeffannoon achuma buufata poolisii bira nu gahe addeeseera.
‘Ati miseensa WBOti’ jedhani ijoollee dararun, otoo hin ajjeesin dura fi erga ajjeesani booda haala mirga ilma nama tuqeen sukkaneessaa ta’een dararu fi suraa kaasani social media gubbaa kaahu. Kuni Lixa fi Kibbaa Oromiyaatti qaamota ‘mootummaa’ jedhamanin kan gahaa jirudha.
Ammammoo magaalaalee naannoo Finfinneetti ‘ati WBO deeggarta’ jedhani nama dhibbaatamaan qabani hidhaa jiru.
Jarana, ‘target’ wal-gochun yoo jalqabame, biyyattiin akkuma Mexico fi Honduras taati. Yeroo sanitti, paartii kiyya fi ganda kiyya dhiisi maatii kiyyallee jechu hin dandeessu. Haalli amma jiru akka yeroo Dargitti bakka lamatti qodamani wal-fixu miti, bakka heddutti qodamani wal-nyaatutu dhufa.
Paartileen KFO fi ABO wanna amma deemaa jiruratti murtii isaani dabarsu qabu. Nama baay’eetu qabamaa hidhamaa jira.
“Abiyyi Ahimad Gara Arabaa kana Deemuf.akkuma amala isaa ajaja ajjeechaa dabarsee deemun isaa waan hin oolleef hayyoonni Oromoo sabaaf quuqamtan of eeggannoon imalaa jenna.xiyyeeffannoon isaas Hayyoota Oromoo ajjeesudha waan ta’eef.boru (13/2/2020) waare booda gara biyyoota Arabaa ni deema. Silaa yoo biyyaa bahu shira dalaguun beekama waan ta’eef; akkuma amala isaa namni (namootni) bebbeekamoon akka ajjeeffaman (midhaman) ajaja dabarsuun isaa hin oluu ta’aa nama, qee’e fi aante keessan mara sirritti eeggadhaa.”
Gidduu kana waan raajii argaa jirra. Ummata keenya Maccaa Wallagga jiraatuu Buraayyuu, Kattaa, Gafarsaa, Ashawaa Meedaa fi bakkoota garagaraa irraa buqqisaa jiru. Biyya keessanitti galaa jedhu. Biyyi isaanii eessa laata?
Ummata keenya Gidduu galeessaa Tuulamaan ammoo lafa keessan isiniif deebisna jedhu. Qonnaan bulaa fi namoota shira isaanii fudhachuu danda’u jedhanii yaadaniif maallaqa dhangalaasaa jiru. Gujii fi Boorana dhaqanii Afaan Gujii fi Booranaa isinitti dubbanna jedhu.
Obbolaa Maccaa fi Tuulama, Siikkoo fi Mandoo, Ituu fi Humbanna, Raayyaa fi Raayituu, Booranaa fi Baarentuu ijoollee Oromoo diina walitti gochuun jaarsummaa nuuf taa’aa Angoo isaanii dheereffatanii nu cafaquuf dhama’aa jiru.
Ni danda’meeree?! Abadan warri kun biyya mitii ganda tokko ykn maatii isaanii bulchu hin danda’ani.
Oromoon gonkumaa lafa fi gosaan wal hin lolu. Lafti Oromoo tokkoo kan Oromoo hundaati. Adeemsi durii Nafxanyaa(Minilik) qoqqoodee nu cabsa ammas haaromsanii itti fayyadamuutti jiru. Nuti ilmaan Oromoo adeemsaa moofaa fi rakasa kana bira kunneerra.
Diinni keenya tooftaa biraa yoo qabaate haa barbaaddatu malee nuti akka adeemsa harcaatota Nafxanyaa har’aan gargar akka hin baane abdii qabna.
OMN: Marii Haala Yeroo, Rakkoo Kibbaa fi Lixa Oromiyaa ( Gur. 12, 2020)
አቶ ታዬ ደንደአ 2 ሚሊዮን ብር ተዘረፍኩ አሉ